एक सयमा पनि बिकेनन् सिभिल बैंकका २९.९२ लाख कित्ता शेयर Bizshala -
एक सयमा पनि बिकेनन् सिभिल बैंकका २९.९२ लाख कित्ता शेयर
काठमाडौँ । सिभिल बैंकले संस्थापक शेयर लिलामीमार्फत् पनि विक्री गर्न नसकेपछि पुनः दोस्रो पटक लिलामीमा विक्री गर्नका लागि सूचना जारी गरेको छ । सिभिल बैंकले निष्काशन गरेको ४० प्रतिशत हकप्रदमा २९ लाख ९२ हजार कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गर्न नसकेपछि पुनः दोस्रो पटक लिलामीमा ल्याएको हो ।
बैंकका शेयर खरीद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले जेठ २ गतेबाट जेठ ९ गतेसम्म आवदेन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थापक शेयर न्यूनतम १ सय रुपैयाँमा कम्तीमा १ सय कित्ता वा सो भन्दा बढी खरीद गर्न सकिने बैंकको सूचनामा उल्लेख छ ।
पहिलो पटक लिलामीमा विक्री गर्दा संस्थापक शेयरधनी नै हुनुपर्ने व्यवस्था पनि दोस्रो पटक लागू गरिएको छैन । साथै एक सय कित्ता शेयर खरीदका लागि पनि यसपटक आवेदन दिन सकिने बताइएको छ । यसअघि एक हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
बैंकको हकप्रद शेयरको विक्री प्रबन्धक रहेको लक्ष्मी क्यापिटलमा लिलामीका शेयर खरीदका लागि आवेदन दिन सकिने छ । आफूले खरीद गर्न चाहेको शेयर बराबरको रकम क्यापिटलको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गरी आवदेन दिन बैंकले सूचना जारी गरेको छ ।
civil bank limited Auction
टुंगियो मेगा र टुरिजमको मर्जर, वैशाख ३० बाट एकीकृत कारोबार
काठमाडौँ । मेगा बैंक र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको एकीकृत कारोबार...
प्रभु बैंकले साधारणसभामा के लैजाँदैछ प्रस्ताव ?
काठमाडौँ । प्रभु बैंकले सोह्रौँ वार्षिक साधारण सभा आगामी जेठ १०...
सर्वाधिक चुक्ता पूँजी भएको बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी कति ?
काठमाडौँ । चुक्ता पूँजीका आधरमा देशकै सबैभन्दा ठूलो क वर्गको...
कुमारीको नाफामा ८८ प्रतिशत छलाङ, अधिकांश सूचक उत्साहप्रद
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकले ७०...
प्रतिशेयर आम्दानीमा नबिल अब्बल , नाफा २.७९ अर्ब
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्मको वित्तीय...
नेपाल बंगलादेश बैंककाे नाफा १४ प्रतिशत कम, अधिकांश सूचक
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमािसक अवधिमा नेपाल...
कुुमारी बैंकले तोक्यो बुक क्लोज मिति
काठमाडौँ , ३० चैत्र । कुमारी बैकले हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रयोजनका...
सेन्चुरीको बैंकको बचत खातामा अब ८ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले ग्राहकहरुलाई नयाँ वर्षको...